Torohevitra hitsidihana ireo toerana manintona tsara indrindra any Beijing | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | soso-kevitra, Beijing
Beijing na Beijing dia renivohitry ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina, tanàna kanto na dia mararin'ny fandotoana be aza ankehitriny. Mifanaraka amin'ny fitomboan'ny harinkarenan'ny Sinoa, tsy mampino ny mandeha mamaky ny araben'i Beijing satria ao aoriany ireo sary izay naneho sinoa an-jatony tamin'ny bisikilety mandeha mamaky ny arabe.
Androany dia tanànan'ny cosmopolitan i Beijing. Angamba tsy eo amin'ny haavo Hong Kong na Shanghai, ireo rahavaviny, fa azo antoka fa tanàna tsy tokony hohadinoina izy io rehefa eo amin'ny radarantsika i Azia. Izy io dia mampifantoka ny fisarihana vanim-potoana roa: ny an'ny amperora sy i Sina kaominista. Ireto misy sasany torohevitra momba ny fitsidihana ireo mpizahatany any Beijing amin'ny fomba tsara indrindra.
1 Tanàna voarara
2 Ny rindrin'ny Great China
3 Fahatsiarovana Mao
Ny Museum Museum. Emperora 24 no tao eo anelanelan'ny Dynasties Ming sy Qing mandra-panjavona mandrakizay i Imperial China tamin'ny 1911. Izy io dia fitambaran-trano misy trano, tohatra, kianja ary tohatra marobe izay eo afovoany dia ny Lila volomparasy, tranon'ny amperora.
Ny pitsiny dia manana endrika mahitsizoro sy mirefy 74 hektara. Voahodidin'ny hadilanana 52 metatra sy rindrina 10 metatra ny haavony. Ao anatiny dia efitrano manodidina ny 8.700 XNUMX no voaisa. Ity rindrina ity dia misy fidirana efatra, iray isaky ny lafiny. Zava-tsarobidy izy io. Ilay tanàna voarara dia mizara roa, ny faritra ampahibemaso izay ampiasain'ny amperora ny governemantany, ary ny faritra tsy miankina nitoerany niaraka tamin'ny fianakaviany.
Rehefa nonina amperora 14, ny marina dia mirakitra sangan'asa tena sarobidy ary izany no mahatonga ilay be pitsiny iray manontolo dia vakoka manerantany tamin'ny taona 1987. Eo amin'ny lafiny avaratry ny Kianja Tiannanmen izy io. Tena mora ny toerana. Ny tranombakoka Izy io dia manana zotra tokana izay avy any atsimo ka hatrany avaratra. Tsy maintsy miditra amin'ny vavahady Wumen ianao ary mivoaka amin'ny vavahady Shenwumen na vavahady Donghuamen. Mandatsaka anao eo akaikin'ny fidirana ny metro.
Tsy maintsy mandray ny laharana 1 ianao ary miainga ao amin'ny Station Tiananmen East. Mivoaha A. Raha mivoaka ao amin'ny gara Tiananmen West ianao dia mivoaka B. Ny zava-misy dia rehefa miala ianao dia tsy maintsy mahita ny Tiananmen Tower ary avy eo dia mandeha avaratra mankamin'ny vavahady Wumen.
Raha manaraka ny laharana 2 ianao dia tsy maintsy mivoaka ao amin'ny Station Qianmen, mivoaha A, mandehana mianavaratra, miampita ny Kianja Tiananmen, mamaky ny tilikambo ary tadiavo ny varavarana. Azonao atao ihany koa ny mandray bus, indrindra ny Tourist Lines 1 sy 2 ary miondrana foana any Tiananmen. Ny tapakila dia manana vidiny roa, eo anelanelan'ny aprily sy oktobra dia vidiny CNY60 ary eo anelanelan'ny Novambra sy Martsa, CNY 40.
Mandoa CNY10 fanampiny ianao hitsidihana ny Treasure Gallery sy ny CYN 10 hafa hitsidihana ny Clock sy ny Clock Gallery. Raha mihoatra ny 60 taona ianao dia mandoa ny antsasaky ny vidinyna manolotra pasipaoro. Ary ahoana no hividiananao azy ireo? Mpitsidika 80 XNUMX isan'andro fotsiny no afaka miditra koa misy ny tapakila izay efa natokan'ireo masoivoho ary ny hafa amidy amin'ny Internet. Zava-dehibe izany vidio haingana ny tapakilanao.
Ny tranokala amin'ny teny anglisy dia mbola tsy azo ampiasaina, noho izany dia tsy maintsy mividy ny tapakila amin'ny alàlan'ny maso ivoho ianao. Ataovy ao an-tsaina rehefa misokatra ny varotra tapakila (tamin'ity taona ity dia nanomboka tamin'ny volana Jolay ary nifarana tamin'ny voalohan'ny volana Oktobra). Aza adino ny manana ny pasipaoronao eo foana. Farany, misokatra manomboka amin'ny 8 ora sy sasany ary mifarana eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 5:4 hariva. Mihidy amin'ny Alatsinainy.
Tokony hanisa ny dia mandritra ny adiny telo na mihoatra ho an'ny afovoany fotsiny ianao. Raha te-hitsidika ny elatra andrefana koa ianao dia fotoana bebe kokoa izao. Misy audiouías, Soa ihany. Hatreto ny fampahalalana, ny toro-hevitra:
aza mandeha amin'ny faran'ny herinandro na mandritra ny fialantsasatra sinoa.
Soso-kevitra ny handeha maraina, maraina be, na amin'ny tolakandro, fa tsy sooo tara satria raha tsy izany tsy ho tafiditra ao amin'ny tranombakoka ianao.
mifanaraka izany mividy tapakila an-tserasera fa misy biraon'ny tapakila izay mandray carte de crédit. Aza adino ny mitondra ny pasipaoronao.
aza adino ny tilikambo mimanda sy ny moat fiarovana. Misy rafitra efatra, iray isaky ny zoro, ary na dia tsy misokatra aza izy ireo dia tsara tarehy ary mendrika jerena sy sary.
raha mila fomba fijery tsara momba ny tanàna voarara ianao tsidiho ny Jiangshan Park, eo alohan'ny vavahady avaratra. Vita ny fitsidihana dia miampita ianao ary eo io. Amin'ny havoana malefaka dia misy pavilion ary avy eto dia mahafinaritra ireo sary. Mitandrema, tsy afaka mamakivaky ny arabe ianao ary dia izay, fa tsy maintsy miampita amin'ny tionelina ianao 20 metatra miala ny avaratra.
ankoatry ny fitsidihana akaiky hafa dia mandehandeha eran'ny Beihai Park, amin'ny 800 metatra tsy misy hafa.
manaova kiraro ahazoana aina
aza manakarama ireo mpitari-dia vonjimaika vonjimaika eny an-dalana
mitandrema amin'ny zavatrao sy ny tapakilanao
Tsy mahazo mijanona ny taxi mba hameno ny mpandeha amin'ny varavarana atsimo na avaratra. Raha manao izany izy ireo dia tsy ara-dalàna.
Ny rindrin'ny Great China
Ny rindrina lehibe dia midadasika be nefa soa ihany any Beijing ianao dia afaka mitsidika faritra sasany nefa tsy mihetsika loatra. Ny volana tsara indrindra hanaovana an'ity fitsidihana ity dia amin'ny lohataona, amin'ny fiandohan'ny fahavaratra na amin'ny fararano. Amin'ny fahavaratra dia miomàna amin'ny hafanana be dia be ny orana.
Tsy mety aminao ny mitsidika ny faran'ny herinandro na ny fialantsasatra satria vahoaka ny sinoa. Raha ny marina misy fizarana valo amin'ny rindrina lehibe manodidina an'i Beijing ka ny dingana voalohany dia ny manapa-kevitra hoe iza no hotsidihinao. Amin'ireo valo ireo, ny fito dia vonona handray fitsidihana ary hanana trano fandroana, fiarovana, fiantsonana: Badaling, Juyongguan, Mutianyu, Gubeikou ary Jinshanling ary Simatai.
Jiankou Io ilay tsy misokatra ho an'ny besinimaro satria efa be dia be ity. Raha te-hahita fizarana malaza sy tsara ianao dia safidio Badaling.
BadalingTsara tarehy izy io, tafaverina amin'ny laoniny, mora azo amin'ny seza misy kodiarana ary maharitra adiny roa na adiny telo izy io. 80 kilometatra miala an'i Beijing izy io ary misy lalamby. Afaka mankany ianao amin'ny lamasinina avy any amin'ny Huangtudian Station na amin'ny taxi-be amin'ny RMB 500.
Juyonqquan: 60 kilometatra miala an'i Beijing izy io, tsy misy lalamby ary elabe boribory ny lalana. Raha manam-potoana kely ianao dia atoro anao izany.
Mutianyu: Manana toerana voajanahary tsara tarehy izy ary tsy olona betsaka toa an'i Badaling. 85 kilometatra miala an'i Beijing izy io ary misy chairlift sy lalamby. Mety amin'ny seza misy kodiarana ihany koa izy io. Tonga amin'ny bus na taxi-be ianao manodidina ny RMB 600.
Gubeiko, Jinshanling, Jiankou, Shixiagan, Huangqhuachen ary Simatai tsara amin'ny fitsangantsanganana izy ireo. Afaka miditra amin'ny sasany ianao amin'ny diabe lavitra. Afaka mandeha an-tongotra avy any Jinshanling mankany Simatai ianao na avy any Gubeiko mankany Jinghanling, ohatra.
Araka ny hitanao dia miankina amin'ny karazana fitsangatsanganana tianao hatao izany rehetra izany. Na ny fandraisana fitsidihana aza afaka mijanona mitoby eo am-pototry ny Great Wall ianao. Izany traikefa izany! Ary raha tsy anao ny lay, azonao atao izany matory ao amin'ny hotely akaiky.
Torohevitra bebe kokoa? Kiraro, satroka, solomaso, rano ary kitapo fanampiana vonjy maika. Ary tsidiho ny trano fidiovana alohan'ny hanombohana ny diany satria, mazava ho azy, tsy misy trano fidiovana intsony.
Ary farany, voatery ny manan-kaja: ny fitsidihana ny fahatsiarovana izay nanorina an'i China maoderina. Fahatsiarovana ity Any amin'ny tendrony atsimo amin'ny Kianja Tiananmen izy io, eo anelanelan'ny Tsangambato ho an'ny Maherifon'ny Vahoaka sy ny afovoan'ny kianja. A tranom-bahiny izay ipetrahan'ny fatin'i Mao ny faty.
Ny rihana voalohany ihany no misokatra ho an'ny besinimaro, miaraka amin'ny efitranony telo sy tapestry miaraka amin'ny tontolo sinoa amin'ny hatsarany rehetra. Misy efitrano fivavahana izay fon'ny mausolika izay misy an'i Mao, izay maty tamin'ny 1976. Misy ny saina sinoa ary izy mipetraka amina palitao volondavenona ao anaty vatam-paty fitaratra voahodidin'ny miaramila, mpiambina voninahiny.
Matetika misy olona miandry hiditra ka manandrama indray ialao ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra. Maimaimpoana ny fidirana nefa misy fitsipika maro: tsy misy sary, tsy misy horonan-tsary. Ho an'izany dia tsy maintsy avelanao ao amin'ny valizy avokoa ny zava-drehetra. Eny afaka miditra amin'ny chrysanthemum izay amidy ao ianao. Aza adino ny pasipaoronao. Na dia misy foana aza ny olona dia haingana ny hetsika. Ny tsara indrindra dia ny tonga eo ho eo amin'ny 10 maraina na alohan'ny famaranana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Beijing » Torohevitra hitsidihana ireo toerana manintona an'i Beijing